Mayelana NATHI - Dongguan Kangna Electronic Technology Co., Ltd.
I-Dongguan Kangna Electronic Technology Co, Ltd.
ingenye ehamba phambili abakhiqizi PCB e China okuyinto ezikhethekile ukukhiqizwa PCB, inhlangano PCB, PCB design, PCB prototype, njll inkonzo yokukhiqiza ngogesi.
Le nkampani yasungulwa ekuqaleni kuka-2006 eShajiao commuity, Humen Town, eDongguan City, esifundazweni saseGuangdong. Ifektri ihlanganisa indawo yokukhiqiza
yamamitha ayisikwele ayi-10000 nomthamo wenyanga wama-50000 Sq.meters futhi unenhlokodolobha ebhalisiwe eyi-8 million RMB.
Le nkampani inabasebenzi abangama-800, kufaka phakathi i-10% yocwaningo nentuthuko; 12% wokulawulwa kwekhwalithi; no-5% wethimba lobuchwepheshe lobuchwepheshe elineminyaka engaphezu kwengu-10 yesipiliyoni embonini ye-PCB.
Imikhiqizo eyinhloko yenkampani ingu-1-40 ungqimba we-PCB, kufaka phakathi i-MCPCB (ibhodi lethusi ne-aluminium), i-FPC, ibhodi eliqinile_flex, i-PCB eqinile, ibhodi esekwe ngobumba, ibhodi ye-HDI, ibhodi ephezulu ye-Tg, ibhodi lethusi elisindayo, ibhodi levolumu esindayo nomhlangano we-PCB . Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu embonini yezimboni, yezokwelapha, yezokuxhumana kanye neyezimoto, ikhompyutha, njll.
Singakunika uhlobo olusheshayo lokujika, iqoqo elincane kanye neqoqo elikhulu lemikhiqizo. Singakwazi ukusingatha zonke izidingo zakho ezinzima kakhulu kalula. Imikhiqizo nezinsizakalo zethu ezisezingeni eliphakeme zizokusiza uthuthukise ikhwalithi yemikhiqizo yakho, zikulethele inzuzo, futhi ekugcineni zikwenze ube nokuncintisana emakethe yakho.
Senza uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthembeka nokuqina kwekhwalithi yomkhiqizo. Imikhiqizo yethu ye-PCB ihlolwa kuyo yonke inqubo yokukhiqiza ye-PCB ukuqinisekisa ukuthi amabhodi wesifunda aphrintiwe asezingeni eliphakeme alethwa kuwe.
Sidlulise isitifiketi se-UL, ne-IATF16949. Sikholelwa ukuthi ikhwalithi impilo, futhi ukuphishekela zero ukukhubazeka umgomo wethu izinga. Tyena inkampani isebenzisa ifilosofi yebhizinisi "yokwethembeka, ukusebenza kanzima, ikhwalithi kuqala, insiza kuqala", Ukunamathela enkambisweni yenkampani enhle kakhulu yabantu, ukufeza isimo sokuwina kwabalingani nomphakathi.
Sithanda ukuzwa kuwe uma unemibuzo noma izidingo ezikhethekile.
Isungulwe i-SMT Business Unit ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuma okukodwa kumakhasimende.
Kusungulwe isikhungo socwaningo nentuthuko.
Ukulungiselela umnyango wezamabhizinisi we-SMT.
Ifektri yathuthela endaweni entsha futhi yengeza imishini emisha yokukhiqiza nokuhlola.
Nweba umthamo wokukhiqiza uye ku-30000 Sq.m ngenyanga.
qala ukwethula umugqa wokukhiqiza we-MCPCB, ukhiqize i-substrate yethusi ne-aluminium substrate PCB.
I-KangNa Electronic Technology Co, Ltd. yasungulwa.
Qamba ngokucophelela umkhiqizo ngamunye ukuze uwenze ube yisitolo
Thatha wonke ama-oda ngokungathí sina futhi uqinisekise ukulethwa ngesikhathi
Yiba nesibindi ngokwanele sokubhekana nazo zonke izidingo, uvuselele izidingo ezikhethekile
Ukwethembeka kuwo wonke amakhasimende futhi unikeze ngezinsizakalo ezigculisayo